Liverpool oo dooneysa inay dhibaatada weerarka ka heysata ku xaliso Jackson Martinez. - Caasimada Online
Home Warar Liverpool oo dooneysa inay dhibaatada weerarka ka heysata ku xaliso Jackson Martinez.
Liverpool oo dooneysa inay dhibaatada weerarka ka heysata ku xaliso Jackson Martinez.
Liverpool ayaa qarka u saaran inay xiiseheeda u weeciso weeraryahanka FC Porto Jackson Martinez. Sida uu qoray wargeyska Talksport.
Martinez oo 26 ayaa si adag loola xiriirinaayey inuu u dhaqaaqo Anfield intii lagu jiray xagaaga laakiin wuxuu go’aansaday inuu ku biiro kooxda reer Portugal.
Weeraryahanka reer Colombia ayaa sii wata waayihiisa la yaabka uu dhigayo ee gool dhalinta, wuxuuna xilli ciyaareedkaan dhaliyey 10 gool 11 kulan oo uu saftay.
Ilo Talyaani ah ayaa laga soo xigtay in tababaraha Liverpool Brendan Rodgers uu sii wato waayihiisa uu diirada ku saarayo weeraryahan wuxuuna aalaaba la kulmay qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Iyadoo uu Andy Carroll si amaah ah ugu biiray West Ham, Liverpool ayaa ku dhibaatooneysay kubadaha ay weerarka ku hesho xilli uu Luis Suarez yahay keliya weerarkooda ay ku tiirsan yihiin.
Porto ayaa ka welweli doonta inay Martinez sii heystaan, laakiin waxay ku qasbanaan doonaan inay Liverpool ka iibiyaan weeraryahanka hadii ay ka helaan qiimaha ay ku rabaan in lagu burburiyo qandaraaskiisa taasoo la rumeysan yahay inay ku dhowdahay 18.5 milyan oo ginni.